प्रमुख समाचार – Page 583 – Hamropati.com
Home»प्रमुख समाचार (Page 583)
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सार्क मन्त्रिपरिषद् बैठक उद्घाटन
By on March 17, 2016 प्रमुख समाचार
काठमाडौं,चैत ४ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को ३७औं मन्त्रिपरिषद् बैठक पोखरामा सुरु भएको छ । बैठकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरे । नेपालको राष्ट्रिय गान बजाएर सुरु भएको बैठकमा सार्कका महासचिव अर्जुनबहादुर थापाले मन्तव्य व्यक्त गर्दै सार्क मुलुकलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्न सार्क क्रियाशील रहेको बताए । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल […]
के छापियो बिहीबारका दैनिक पत्रिकामा ?
By on March 17, 2016 पत्रपत्रिका, प्रमुख समाचार
४ चैत, काठमाडौं । यही चैत ७ गतेदेखि हुन लागेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा सरकारी जम्बो टोलीका लागि एक करोड रुपैयाँ भन्दा… ४ चैत, काठमाडौं । चिनियाँ बैंकले नेपालमा शाखा खोल्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको समयमा चिनियाँ बैंकले नेपालमा शाखा खोल्ने… ४ चैत, काठमाडों । उमेरहदका कारण अवकाशनजिक […]
‘ठूला दल एकजुट नभई राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुदैन’ -पूर्वराष्ट्रपति यादव
विराटनगर,चैत ४ । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बिहीबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै यादवले संविधान कार्यान्वयन, संसोधन, कानुन ऐन निर्माणका लागि सबै दल एक ठाउँमा उँभिनुको पर्ने बताए । पूर्वराष्ट्रपति यादवले लोकतान्त्रिक विधिबाट जारी भएको संविधानलाई नै आधार मानेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने बताए […]
भूकम्पप्रभावित जिल्लामा अब ‘लाइभ स्कुल’
फाइल तस्वीर ४ चैत, काठमाडौं । सरकारले विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट अध्ययन गराउन लाइभ स्कुल सञ्चालन गर्ने भएको छ । भक्तपुरको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा स्थापना हुने लाइभ स्कुलको लागि टेलिभिजन स्टेसन नै स्थापना हुने भएको आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ । यसका लागि करिब १८ करोड लगानी हुने अनुमान छ । यस्तो […]
शीर्षदल संविधानविपरित अडान राख्दै, संसद नियमावलीमा यस्तो लफडा
काठमाडौं,चैत ४ । व्यवस्थापिका संसद कार्यसञ्चालन नियमावली निर्माणमा देखिएको विवाद मिलाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच नै छलफल हुने भएको छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको संख्याका विषयमा मस्यौदा समितिका सदस्यबीच कुरा मिल्न नसकेपछि शीर्ष तहमै छलफल हुन लागेको हो। सत्तारुढ दल र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसबीच कुरा मिल्न सकेको छैन। एमाले र एकीकृत माओवादीले नयाँ संविधानले […]
नेपालमै तयार भयो जिका परीक्षण प्रयोगशाला
फाइल फोटो ४ चैत, काठमाडौं । महामारीका रुपमा फैलिएको जिका भाइरस परीक्षण अब नेपालमै हुने भएको छ । पछिल्लो दिनमा टाउकोदुखाइको विषय बनेको यो भाइरस परीक्षणका लागि महामारी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकुमा प्रयोगशालालाई तयारी अबस्थामा राखिएको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ । केही समयअघि ब्राजिलसहित ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा महामारीका रुपमा फैलिएको जिका भाइरस नेपालमा […]
श्रीमान् चोर, श्रीमती अपहरणकारी !
श्रीमान् चोर, श्रीमती अपहरणकारी ! २०७२ चैत ४ गते ६:५८ मा प्रकाशित ४ चैत, काठमाडौं । रुीमान् चोर श्रीमती अपहरणकारी । यसतो सुन्दै अचम्म लाग्न सक्छ । तर, यो कुनै कथा हौइन । विवाहको २ दिनमै चोरी अभियोगमा पक्राउ परेका श्रीमान्लाई छुटाउन श्रीमती बालिका अपहरणमा संलग्न भइन् । अन्ततः अपहरणकारी भएको अभियोगमा श्रीमति पनि प्रहरीकै […]
प्रधानमन्त्रीको चीन जाने टोलीको भ्रमण भत्ता करोड भन्दा बढी
काठमाडौं,चैत ४ । यही चैत ७ गतेदेखि हुन लागेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा सरकारी जम्बो टोलीका लागि एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी दैनिक भ्रमण भत्ता (टीएडीए)मा खर्च हुने भएको छ । यो खर्च यातायात तथा आबासबाहेकको भएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् को निर्णयअनुसार चीन जाँदा प्रधानमन्त्रीले दैनिक ती सय, […]
न्यायाधीश नियुक्तिमा एमाओवादी अडान यथावत
जिका भाइरसको परीक्षण अब नेपालमै
काठमाडौं,चैत ४ । महामारीका रुपमा फैलिएको जिका भाइरस परीक्षण अब नेपालमै हुने भएको छ । पछिल्लो दिनमा टाउकोदुखाइको विषय बनेको यो भाइरस परीक्षणका लागि महामारी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकुमा प्रयोगशालालाई तयारी अबस्थामा राखिएको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ । केही समयअघि ब्राजिलसहित ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा महामारीका रुपमा फैलिएको जिका भाइरस नेपालमा पनि गर्मी बढेसँगै […]
« Previous 1 … 581 582 583 584 585 … 588 Next »